Turkey ayaa First New Generation National Freight baabuur la soo saaray xarumaha TÜDEMSAŞ | RayHaber | raillynews
[17 / 02 / 2020] Codsi Cashuur-qaadis ah oo Casriga Istaanbuul ee Istanbul ayaa Bilaabmay	34 Istanbul
[17 / 02 / 2020] Khadka Tooska ah ee Eminönü Alibeyköy Tram in uu Adeeggu noqdo dhamaadka 2020	34 Istanbul
[17 / 02 / 2020] Maalgashadayaasha weyn ee Aksaray waxay la galeen Ulukış ilaa Aksaray Railway ee ATSO	68 Aksaray
[17 / 02 / 2020] Shirkadda CRCC oo Sameynaysa Nidaamka Tareenka Xawaaraha Sare ee Ingiriiska	44 UK
[17 / 02 / 2020] Muusikada Steamboat ayaa La Doortay	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasTurkey ayaa First New Generation National Freight baabuur la soo saaray xarumaha TÜDEMSAŞ
Turkey ayaa First New Generation National Freight baabuur la soo saaray xarumaha TÜDEMSAŞ
27 / 08 / 2019 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, Gawaarida Tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, TÜDEMSAŞ, TURKEY, gaadhi
turkiyenin waxaa soo saaray in baabuurta xamuulka ugu horeysay qaranka goobaha cusub ee jiilka TÜDEMSAŞ
jiilka koowaad ee cusub Turkey ayaa soo saaray TÜDEMSAŞ in Sivas baabuurta xamuulka qaran laga rabey. jiilka koowaad ee cusub Turkey ee baabuurta xamuulka qaranka 29,5 mitir dheer la weel awoodda waday in hal baabuur ah 2 vagonluk, oo ku saabsan 9,5 midabo fududee waa xumbo boqolkiiba 26 ka baabuurta kale ee gaadhi oo la mid ah, Mar kale, sida laga soo xigtay baabuur u dhigma ee Europe la tons 25,5 ah oo miisaankeedu yahay waddada 4 in kabadan tan oo culeys ah oo qaadaya awood. Kordhinta awoodda qaadista waxay hawl-wadeenka siisaa fursad. Sababo la xiriira culeyska fudud ee tare, 15 wuxuu leeyahay culeys ka sareeya ama ka faa iidooyin qiimo jaban.
Khibradda iyo waayo-aragnimada TÜDEMSAŞ, waa wadankeena ku faan soo saarida gawaarida xamuulka. In la abuuro iskaashi ah by taageeridda waaxda gaarka ah iyo soo saaray, waxaa u suurtagashay in ay dhoofiyaan baabuurta si ay warshad dildillaacsadeen Turkey fududeeyeen ugu weyn baabuur dibada. Gawaarida guryuhu waxay ku samaysan yihiin heerar 85 oo ku yaal maraakiib xamuul oo laga soo saaray TÜDEMSAŞ.
TÜDEMSAŞ sidoo kale waa warshadda halkaasoo Bozkurt, aagga uumiga ee waddankeena iyo qarankaba, laga soo saaray Sivas 1961. Bozkurt 25 ayaa ku soo bandhigay horteeda warshadda ka dib markii uu shaqeeyay sanado. Wuxuu yiri waxaan ahay shaqo Warshadaha Turkiga oo laga soosaaray gudaha iyo qarankaba dhamaan qeybaha uu ka koobanyahay 1961. 1961 gudaha Sivas, Bozkurt iyo Eskişehir Karakurt locomotives waxay soo saarteen, waxay soo saareen gaariga kacaanka ee Warshadaha Turkiga hadda soo saari kara dhammaan baahiyaha dalkeenna sida kuwa gudaha iyo kan qaran ahaanba. Ha soo gelinin warshadaha Turkiga wax soo saarka. Guusha warshadaha warshadaha ee Turkiga. Lacagta ha u ogolaanin shisheeyaha. Ku dhaqan warshadeena Qaranka mabda 'ahaan.
Iyadoo la raacayo mabda 'this, TÜDEMSAŞ wuxuu ka gudbay lambarkii ugu horreeyay ee 600 ee baabuur 2 oo uu dalbaday Azerbaijan bishii la soo dhaafay wuuna ka gudbay imtixaannadii. Intaa waxaa u dheer, waxay saxiixday borotokool Mareykan ah funaanadda xNUMX cagaha gaagaaban ee xamuulka qaada ee lagu ridayo wadashaqeynta Gökyapı. Baabuurrada la soo saari doono waxaa loo dhoofin doonaa shirkadda Mareykanka ee loo yaqaan 'GATX' oo ah shirkad caalami ah oo adeegyo kiro ka bixisa meelo badan oo adduunka ah.
Nagu soo dhowow meheradda; Waxaan jeclaan lahaa inaan u hambalyeeyo Maareeyaha Guud Mr. Mehmet Başoğlu iyo sidoo kale dhammaan maamulka TÜDEMSAŞ waxaanan u rajeynayaa inay sii wadaan guusha.
Maanta taariikhda: 23 Maarso 2017 New Generation Wagon Qaran Qaran oo ay soo saartay TÜDEMSAŞ
TÜDEMSAŞ wuxuu soo saaraa baabuur cusub oo qaran
Jiilka Cusub ee Baabuurta Qaranka oo la soo bandhigay
New Generation Freight Car waa mid ka fudud oo ka hufan marka loo eego asxaabtiisa
Caasimadda Europe ee "Lightest Wagon" oo laga soo saaro Sivas
Dhammaadka Kaalinta Cusub ee Soo-saarista Wagon
KARDEMİR lahaa Rikoorkiisa Cigaal, gariiradda qaro Turkey ayaa waxaa soo saaray
New Generation National Freight baabuur ee Turkey, iyo BTK-European Rail
Juunyeerka Qaranka ee Cusub ee TÜDEMSAŞ
Zaman cusub ee wax soo saarka gaari xamuul ah in Turkey
Wagon Qaran Qaran iyo TÜDEMSAŞ
TÜDEMSAŞ 750 wuxuu helaa amar loogu talagalay Wagon-ga Qaranka
Marmaray Line Tool in Work 440 300 waxaa soo saaray dalka Turkiga
Gawaarida cusub ee qaranka iyo waddanka cusub ee ay soo saartay GEN Brand
Gawaarida xamuulka ah
wax soo saarka baabuurta
Transanatolia Rally to Finish in Sanliurfa
Gaadiidka TCDD Shaqaalaha Naafada ah, Laaluushka hore iyo shaqaalaha
Khadka Tooska ah ee Eminönü Alibeyköy Tram in uu Adeeggu noqdo dhamaadka 2020
Maalgashadayaasha weyn ee Aksaray waxay la galeen Ulukış ilaa Aksaray Railway ee ATSO
Muusikada Steamboat ayaa La Doortay
SAMULAŞ Waxaa La Diiwaangeliyay Tayadeeda
Güzelyalı 19/1 Wadada Wadada ayaa loo furay Gaadiidka
Ombudsman: 'Kursiga fadhiga ma ilaaliyo tareenka waxyeelada leh.
Isbitaalka Magaalada Konya wuxuu noqon doonaa joogsiga ugu dambeeya ee Alaaddin Courthouse Tram
Shirkadda Alstom si ay u Iibsato Shirkadda bambaanooyinka
Ogeysiis Qandaraas Bixin: Sameynta Wadooyin Go'doon ah oo ku Yaala Magaalada Izmir ee Xaafadda Aluminothermic Rail Welding
Ogeysiinta Qandaraaska: Saldhigga taraafigga ayaa la iibsan doonaa
Febraayo 18 @ 14: 30 - 15: 30
Halkee loo diraa Tesla Roadster 2 boos kahor hadda?
50 kun oo ganaax TL ah ayaa loo saari doonaa kuwa iibiya baabuurta banaanka yaallay
Qaybaha Gawaarida waxaa laga soo saari doonaa Bean kafee